Ny fomba ny olona hihaona ao Frantsa - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ny fomba ny olona hihaona ao Frantsa
Rehefa hahamaro, manisa tsirairay double tanany
Toy izany koa, dia afaka mahita ny olona any amin'ny firenena rehetraMiara-miasa isika, mandeha an-tsekoly miara-mandehandeha ao amin'ny trano fisotroana, na ny fiara fitateram-bahoaka, velona varavarana manaraka, ao amin ny fanatanjahan-tena club, ao amin'ny Aterineto, milahatra eo anoloan'ny fivarotana, hihaona amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana ifampizarana namana, sns.sns. Eny ary, raha manao a asa lehibe ao amin'ny pelaka fisotroana. Raha tsy izany, dia tsy maintsy ho misokatra sy ny olona ho avy any aminareo, fa ianareo koa mba mangataka ny olona tianao raha toa ka azo antoka momba ny firaisana ara-nofo. Azonao atao koa ny manao ny fanendrena an-tserasera, na dia tokony handray fepetra rehefa mihaona ny olona hafa amin izany fomba izany. Ny fahita mahazatra ho fiarahabana ny ao Frantsa dia ny hoe"bonjour"(izay midika hoe"tsara ny maraina") na"bonsoir"(tsara hariva). Tsy ara-dalàna"salama"fiarahabana mety ho ampiasaina eo ireo namana (matetika dia eo amin'ny roa aminareo, mangovitra ny tanana isaky ny hafa). Tsy misy, ny nofy dia asa izay mitranga eo amin'ny atidoha ny olona amin'ny biby.
Toy izany koa ny kajy dia mitovy amin'ny x
Tsy misy, tsy misy ody radar fa afaka mametraka ny fifandraisana eo amin'ny torimaso sy ny olona matory. Dia mora kokoa ny sary an-tsaina hoe afaka"vakio"olona iray hafa ny eritreritra mandritra ny torimaso noho ny mandritra ny torimaso. Satria an-tsaina ny famakiana ny fikarohana dia hita tsy vita mihitsy, ny filazana momba ny"matory"an-tongotra na ny momba ny"fivoriana olona iray hafa ao amin'ny torimaso"dia azo inoana fa hosoka. Tahaka izany ihany koa ny toerana hafa. Ny elektronika, ny mpanoratra, na teny voalahatra. Fifandraisana afaka midika koa hoe mandeha, ka lalana, lalamby, ny rivotra sy ny rano ny fitaterana dia Eny. Raha manana be dia be iraisana na dia mifankahazo tsara amin'ny tsirairay, tsy maninona raha toa ka efa nihaona teo aloha, mandra-pahoviana ny olona, dia niresaka momba azy ireo. mba hampitombo ny vatana. noho Izany, TES. Ankehitriny ianao dia afaka manao kajy ny lanjan'ny h.
Ahoana no ahafahan ny Shinoa tovovavy hahita ny lehilahy frantsay ao Frantsa? Daty amin'ny Frantsa
hiresaka tsy misy video ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana video chats amin'ny zazavavy Fiarahana tsy misy fisoratana anarana miaraka amin'ny finday ny sary Mampiaraka toerana ho an'ny lehibe video mampiaraka dokam-barotra vehivavy video firaisana ara-nofo mivantana Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana